Ekpere ịgwọ nchegbu. ? Na -alụso nrụgide na ịda mbà n'obi ọgụ.
3 Mingụ Nkeji
Ekpere ka oghara ichegbu onwe. Nchegbu bụ mmetụta ahụ nke na-eme ka ihe ọma dị na ndụ bụrụ ihe kachasị njọ na-akpata nchegbu na nhụjuanya. Ọ bụrụ na ị bụ onye okwukwe ma ọ bụ chọọ ịbụ otu, fanye na ndụ gị kwa ụbọchị a Ekpere ịgwọ ụjọ. Ọ nwere ike ịbụ ọgwụ kachasị mma iji mesoo oge ejighị n'aka na enweghị olileanya.
1 Ekpere ka oghara ichegbu onwe
2 Ekpere maka ogwugwu
3 Ekpere ka ogwoo okwukwe n’oge obula
4 EKPERE iji wezuga nchegbu nke osiso
Nkọwa sayensị nke a na -ejikarị maka nchekasị bụ: "ihe na -adịghị mma, nke ga -adị, nke na -ezughị oke, ọnọdụ mmetụta uche nke ụjọ maka ịdị mma nke ahụ erughị ala," mana okwu ndị a anaghị egosipụtakarị mmetụta gị, ọ bụ ha? ? Mana ugbu a, ị ga -ajụrịrị onwe gị ihe na -echegbu gị na etu a Ekpere ịgwọ ụjọ ị nwere ike inyere aka. Taa, isi ihe abụọ na-akpata nchegbu bụ ọrụ na mmekọrịta ịhụnanya, ebe ọ bụ ihe ndị a bụ akụkụ abụọ nke ndụ ebe anyị bufere ibu ma na-atụ egwu karịa ọdịda. Nsogbu a anaghị echegbu onwe ya, nsogbu bụ mgbe oke ụjọ na ịrara onwe ya nye ọrụ na mmekọrịta na-egbochi anyị ịnweta ahụike, ụra abalị nke ọma na ọbụna iri nri nke ọma. Ugbu a ị marala nsogbu gị na etu o siri metụta ndụ gị, ugbu a bụ oge ịchọ ụzọ isi chịkwaa nchegbu a niile n’ime gị! Ọtụtụ na-achọ ọgwụgwọ, ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ, mana e nwekwara ụzọ okwukwe nke ọma. Nwekwara ike ịchọ enyemaka ahụike, mana ọ bụrụ na ị na-esi n'ụra kwa ụbọchị mgbe ị na-ekpe ekpere ị ga-agwọ nchegbu, ụbọchị gị ga-abụ nke ọma, na-enwe udo nke ime na obi iru ala.
Ekpere maka ogwugwu
“Ekwere m, Onyenwe anyị, na ị bụ Chineke Nna Pụrụ Ime Ihe Niile, onye okike nke eluigwe na ụwa. Ekwere m na Jizọs Kraịst, onye nzọpụta nke mmadụ niile. Ekwere m na Chukwu Nsọ Muo nso. Chineke, taa anyị na-arịọ maka amara nke nnwere onwe si nchegbu n'ime anyị. N'aha Jisos, naputam na nkpagbu a, naputam na nkpagbu ahu. Onye-nwe-ayi, ka ike inwere-onwe-gi puta mmụọ nke obi-nb anyu ọ bula, wepu ihe-njiko nile na nkpuchi nile nke nkpà. Gwọọ, Dinwenu, ebe ihe ọjọọ a bi, gbanye nsogbu a na mgbọrọgwụ ya, gwọọ ncheta, akara adịghị mma. Onye-nwe Chineke, nwere ike ọ joyụ rikpuo obim. Were ike gi na aha Jesus, megharia akuko m, ihe gara aga na nke ugbua. Hapụ m, Onyenwe m, hapụ ihe ọjọọ niile, ka m gwọọ m ma hapụ gị n’ihu gị n’oge owu na-ama gị, gbahapụrụ ya na nke m jụrụ. Ana m ajụ ike nke nnwere onwe nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, nchekasị, enweghị mgbagwoju anya, enweghị olileanya, ma ana m ejidesi ike ya, Onyenwe anyị, na amara ya. Nye m, Onyenweanyị, amara ịtọhapụ gị na nchekasị, nhụjuanya na ịda mba. Amen. E nwekwara ihe ọzọ Ekpere ịgwọ ụjọ nke dị mkpụmkpụ. Nwere ike idetu ya n'akwụkwọ ma mee ya mgbe ọ bụla iwe nwere ike iwe gị.
Ekpere ka ogwoo okwukwe n’oge obula
«Onyenwe anyị Pụrụ Ime Ihe Niile, arịrịọ nkwanye ugwu na enweghị okwukwe ọjọọ. A na m arịọ maka obere udo gị, ngọzi gị na nchekasị gị. Daalụ, m ga na -enwe ekele mgbe niile ruo ọgwụgwụ. Amen.
EKPERE iji wezuga nchegbu nke osiso
“Onyenwe m, naanị gị matara obi m, yabụ okwukwe na ịdị umeala, a na m arịọ gị ka amara nye gị itinye nchekwa m na nchekasị gị. Achọrọ m ịhapụ onwe m na ogwe aka gị, tụkwasị obi ma jiri nwayọ na-echere mmemme gị na ndụ m! Chekwaa echichem, mmetụta m na echiche ziri ezi, yabụ anaghị m eche nke ukwuu. Nyere m aka ime ka uche m dịrị n’ihe dị mma maka mụ na ala eze gị. Soro m nsọ, ka m bụrụ mmadụ jupụta na mmụọ nsọ, na-eme ka udo dị jụụ, nwee udo na udo! Nye m ume ka m wee mee ka mmetụta m na echiche m guzosie ike site na ịtụkwasị Chineke obi. Nna m ukwu, ekele gị maka na ama m na ị na-elekọta m anya. M ga-agba mbọ ịgbaso nzọụkwụ niile ị gosipụtara m na ọ dị mkpa ka atụmatụ gị mezuo na ndụ m. Ekwere m gị na okwu gị. A na m enye gị nchegbu m niile. Gwọọ m ụjọ niile! Atụkwasara m obi gị obi. Amen.